iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade • TECH CORNER
iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade
ဒီနေ့မှာတော့ iPhone X ပိုင်ရှင်တွေအတွက်
အခုနောက်ဆုံးပေါ် iPhone 11 Pro series တွေကိုလဲသင့်လား?
ဘယ်လိုအချက်တွေက မလဲသင့်တာလဲ? စတာတွေကို ရေးသားဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။
Apple ရဲ့ ၁၀ နှစ်ပြည့်အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ iPhone X ဟာ အခုအသစ်ထွက် iPhone 11 pro တွေနဲ့ဆိုရင် ၂ နှစ်‎နောက်ကျနေပါပြီ။ သင့်အနေနဲ့ iPhone တွေကို နှစ်တိုင်းအသစ်ထွက်တိုင်း ကိုင်ကို ကိုင်ရမဲ့ သူတစ်ယောက်လို့ ခံယူထားရင် ၊ Budget လဲ ပေါတယ်ဆိုရင်တော့ အောက်မှာ ဖော်ပြမဲ့ အချက်တွေကို ဆက်မဖတ်ပဲ 11 Pro series ကို လဲလိုက်ပါ။ ဒါပေမဲ့ နောက်ဆုံးပေါ်အသစ်ဆိုတဲ့ခံစားချက်ရယ် ၊ iPhone X ထက် features တွေပိုစုံတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်ရယ်ဟာ သာမန်ဖုန်းအသစ်လဲမဲ့ users တွေအတွက် ပေးဆပ်သင့်ရဲ့လားဆိုတာ အောက်မှာ ဖော်ပြမဲ့ အချက်လေးတွေ နဲ့ ယှဉ်ထိုးကြည့်လိုက်ရအောင် …
iPhone X ရဲ့ ရှေ့မျက်နှာပြင်ဘက်ခြမ်းဟာ iPhone 11 pro နဲ့ အတူတူပါပဲ ဖုန်းကို ပက်လက်လှန်ပြီးချထားရင် ခွဲရတောင် ခက်ပါလိမ့်မယ်။ နောက်ဘက်မှာတော့ camera အထားအသိုပြောင်းသွားတာရယ် ၊ အရောင်အသစ်တွေတိုးလာတာရယ် ၊ နောက်က Glass ကို Matte finish (ကိုင်ရတာ ချောမနေအောင်) လုပ်ပေးထားတာရယ်ကလွဲရင် သုံးထားတဲ့ Materials တွေကလဲ အတူတူပဲ ဖြစ်ပြီး Design ပိုင်းကလဲ apple ရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း သိပ်ပြီး မထူးခြားသွားပါဘူး။ တကယ်လို့ လူကြားထဲမှာ ဖုန်းလာတဲ့အခါ ဖုန်းထုတ်ပြောရင် ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်ခြမ်းက ကင်မရာ setup ကြီးက iPhone 11 Pro ပါလားဟ ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးလိုချင်ရင်တော့ အသစ်လဲသင့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အနေနဲ့ကတော့ iPhone X နဲ့ 11 Pro ကို Design ကြောင့်ဆိုရင် အခုချိန်မှာ မလဲသေးပါဘူး။ (ဒါကျွန်တော့် တစ်ဦးတည်း အမြင်ဖြစ်ပါတယ်။) ပြီးတော့ နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ 2020 မှာ iPhone တွေရဲ့ Design ပိုင်း ပြောင်းလဲလာနိုင်ချေလဲ ရှိပါသေးတယ်။ Design ပိုင်းကြောင့်လဲချင်တာဆိုရင် iPhone 6/7/8 ပိုင်ရှင်တွေအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ လဲသင့်တယ်လို့ မြင်မိပါတယ်။
iPhone 11 pro ကို ဝယ်ဖို့စဉ်းစားတာဟာ အခုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ iPhone X က အသုံးပြုရတာ မသွက်လက်ပဲ လေးလံနေလို့လား? ဒါဆိုရင်တော့ မလဲသင့်သေးပါဘူး iPhone 11 Pro ရဲ့ A13 chip ကြီးက Smartphones တွေအားလုံးထဲမှာ အကောင်းဆုံး ၊ အမြန်ဆန်ဆုံးဆိုတာ အမှန်တကယ်ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုချိန်မှာ သင့်ရဲ့ iPhone X လေးပေါ်မှာလဲ App store မှာ ရှိတဲ့ ဘယ်လို Apps and Games မျိုးကို မဆို ကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်သလို Daily Usage မှာလဲ iPhone X ရဲ့ Performance ဟာစိတ်မပျက်ရသေးပါဘူး။
Camera ဆိုတဲ့ နေရာမှာတော့ စဉ်းစားရတာ နည်းနည်းခက်ပါတယ်။ iPhone 11 Pro မှာ Night Mode ရမယ် ၊ Ultra Wide တွေရိုက်လို့ရမယ် ၊ ရှေ့ဘက် Selfie Camera ကနေ Slofie (slow-mo Selfie video) တွေ ရိုက်လို့ရမယ် ၊ 4K recording ကို 60fps အထိရိုက်လို့ရမယ်။ ဒီအရာတွေကို iPhone X ပေါ်မှာ ရိုက်လို့မရပါဘူး ဒါပေမဲ့ … ဓာတ်ပုံကောင်းတစ်ပုံဟာ camera ပေါ်မှာ မူတည်တာမဟုတ်ပဲ Camera နောက်က လူပေါ်မှာ အဓိက မှီတည်တယ်ဆိုတာကိုလဲ ပြန်လည်သတိချပ်စေချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော့် အမြင်အရတော့ iPhone X ရဲ့ camera ဟာလဲ ပုံမှန်နေ့စဉ်သုံးအတွက် ပြည့်စုံပြီး တော်ရုံဖုန်းကင်မရာတွေတန်းတူ ကောင်းတုန်းပါပဲ။ Nightmode ဘာညာအတွက် App သုံးမယ် ၊ Wide shot တွေအတွက် Lens အပိုလေးတွေနဲ့ရိုက်မယ် စသည်ဖြင့် ဖြေသိမ့်လို့ရပါတယ်။ အပေါ်မှာပြောပြခဲ့တဲ့ iPhone 11 Pro ရဲ့ Camera လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းတွေဟာ သင့်အတွက် သိပ်မထူးဘူးလို့ ခံစားရရင် iPhone 11 Pro တွေကို မလဲသင့်သေးပါဘူး။
iPhone 11 Pro တွေရဲ့ Super Retina XDR Display ကြီးဟာ Contrast တွေ ပိုကောင်းလာတယ် ၊ brightness တွေမှာ Nits(အလင်းအား) တွေပိုကောင်းလာတယ် ၊ iPhone X ထက် ပိုပြီးကောင်းလာတယ်ဆိုတာတော့အမှန်ပါ။ ဒါပေမဲ့… သင့်ရဲ့ iPhone X မှာလဲ Smartphone တစ်လုံးရဲ့ Display မှာရှိသင့်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ အကုန်ပြည့်စုံနေတုန်းပါပဲ။ Pixels Per Inch(ppi) ချင်း ယှဉ်မယ်ဆိုရင်လဲ iPhone X မှာလဲ 458 ppi, iPhone 11 Pro မှာလဲ 458ppi အတူတူပဲဖြစ်ပါတယ်။ iPhone X ရဲ့ HDR, True Tone, Wide Color Gamut တွေဟာလဲ iOS Apps အားလုံးနဲ့ ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်နေတုန်းပါပဲ ဒီ App ကတော့ iPhone 11 Pro ရဲ့ Display ပေါ်မှာမှ အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာမျိုးမရှိသေးပါဘူး။ ပြီးတော့ iPhone X ထွက်ခဲ့တုန်းကလဲ သူ့ခေတ်မှာ အကောင်းဆုံး Display ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ မေ့ပစ်လို့တော့ မရပါဘူး။
Display ကြောင့်ဆိုရင်တော့ iPhone 11 Pro နဲ့ မလဲသင့်သေးဘူးလို့ မြင်မိပါတယ်။
ဒီအချက်ကတော့ iPhone X က အနိုင်ရတဲ့အချက်ပါ iPhone X ဟာ iPhone 11 Pro နဲ့ Pro Max ထက်ပိုပေါ့ပြီး နည်းနည်းလေးပိုပါးပါတယ်။ ကိုင်ရတာ လက်ထဲမှာ ကျစ်ကျစ်လစ်လစ်နဲ့ compact ပိုဖြစ်ပါတယ်။ iPhone X (174gram), 11Pro (188gram), 11 Pro Max(226gram) စီအသီးသီး ရှိပြီးတော့ iPhone X ကတော့ အပေါ့ပါးဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ သင်က compact phone တွေကို ပိုသဘောကျတယ် ၊ လေးတာကိုလဲ မကြိုက်ဘူးဆိုရင် အထူးသဖြင့် 226 gram တောင်လေးတဲ့ 11 Pro Max ကို ဝယ်ဖို့သေချာ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ (ကျွန်တော့်အနေနဲ့ စဉ်းစားရမယ်ဆိုရင်တော့ compact phone တွေ ၊ ပေါ့ပါးကျစ်လစ်တဲ့ ဖုန်းတွေကို သဘောကျတာကြောင့် 11 Pro Max ကို လုံးဝဝယ်ဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ ဖုန်းတစ်လုံးဟာ အတော်လေးနေပြီး အိတ်တွေထဲ ထည့်လို့ အဆင်မပြေတာမျိုးကို ကျွန်‎တော်ကတော့ သဘောမကျပါဘူး တကယ်ဆိုရင် 138 gram ပဲရှိတဲ့ iPhone7ရဲ့ size နဲ့ အလေးချိန်ကို သဘောအကျဆုံးပါပဲ။ ဤကား စကားချပ်)
Battery Life မှာတော့ iPhone 11 Pro Series တွေရဲ့ အသုံးခံမှူဟာ အထင်ကြီးစရာကောင်းပါတယ်။ iPhone 11 Pro (3046 mAH) ဟာ iPhone Xs ထက် ၄ နာရီလောက်ပိုအသုံးခံပြီး 11 Pro Max (3969 mAH) က Xs Max ထက် ၅နာရီပိုပြီးအသုံးခံလာပါတယ်။ iPhone X မှာတော့ 2716 mAH ပဲ ပါဝင်ပါတယ်။ ဆိုတော့ အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေအားလုံးထဲမှာ အခုပြောတဲ့ Battery ပိုခံတာကို လိုချင်တာကြောင့်ဆိုရင်တော့ iPhone 11 Pro Series တွေကို လဲသင့်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဟာကို သေချာပြန်စဉ်းစားကြည့်ပါ Battery Life ကို ကိုယ်က တကယ်လိုအပ်ရဲ့လား ၊ အဲ့ Battery Life အတွက်နဲ့ iPhone 11 Series တွေကို လဲလိုက်မှာလား ဒါမှမဟုတ် 2020 iPhone အသစ်တွေကို စောင့်မလားဆိုတာကိုပေါ့။ ပြီးတော့ အခုကိုယ်အသုံးပြုနေတဲ့ iPhone X ရဲ့ Battery Life က 80% အောက်ရောက်နေတယ်ဆိုရင် Authorized Reseller/Service တွေမှာ Battery Replacement Program တွေရှိပါတယ်။ (ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့ $70 လောက်သုံး Battery အသစ်လဲပြီး iPhone X လေးကိုပဲ ဆက်ကိုင်ဖြစ်နေဦးမှာပါ 😁)။
7.iOS & User Experience
ဟုတ်ပါတယ် အဓိက အရေးကြီးဆုံးကတော့ iOS & User Experience ပါပဲ။ iPhone X ပေါ်မှာလဲ iOS 13 ကိုကောင်းကောင်းအသုံးပြုနိုင်တယ် ၊ DarkMode လဲရတာပါပဲ ၊ iPhone 11 Pro လဲ iOS 13 သုံးတာပါပဲ သုံးရတဲ့ User Experience ချင်းလဲ ထူးထူးခြားခြား ကွာသွားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ပြီးတော့ အပိုဆုအနေနဲ့ iPhone X မှာ iPhone 11 Pro series တွေမှာ ဖယ်ရှားခြင်းခံလိုက်ရတဲ့ 3D Touch လေးပါ အဆစ်သုံးလို့ရပါသေးတယ်။
စာတွေဖတ်လိုက်ရတာ အရမ်းရှည်သွားတယ်မို့လား ၊ iPhone အသစ်ဝယ်မဲ့ ပိုက်ဆံလေးကို ပြန်သိမ်းလိုက်ပြီး လက်ထဲက iPhone X လေးကိုပဲ ဆက်သုံးနေလိုက်ပါလို့ အကြံပေးချင်ပါတယ်။ 😜
(အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့ အရာတွေက ပိုက်ဆံပေါတဲ့သူတွေ ၊ Rick Kids တွေ ၊ iPhone Series အသစ်တိုင်းကို အမြဲဝယ်ကိုင်နေတဲ့ သူတွေအတွက် မဟုတ်ပဲ ကျွန်တော့်လို ဖုန်းတစ်လုံးဝယ်ဖို့ စဉ်းစားနေတဲ့သူတွေ ၊ 2020 iPhone တွေကို စောင့်နေတဲ့သူတွေအတွက် ဆိုတာ သတိချပ်ပေးပါ) xD
Photo Credit to Macworld and Forbes
ဒီနမှေ့ာတော့ iPhone X ပိုငျရှငျတှအေတှကျ
အခုနောကျဆုံးပျေါ iPhone 11 Pro series တှကေိုလဲသငျ့လား?
ဘယျလိုအခကျြတှကေ မလဲသငျ့တာလဲ? စတာတှကေို ရေးသားဖျောပွလိုကျပါတယျ။
iPhone X နှငျ့ iPhone 11 Pro တို့အား နှိုငျးယှဉျကွညျ့ခွငျး
Apple ရဲ့ ၁၀ နှဈပွညျ့အထိမျးအမှတျအနနေဲ့ ထှကျရှိခဲ့တဲ့ iPhone X ဟာ အခုအသဈထှကျ iPhone 11 pro တှနေဲ့ဆိုရငျ ၂ နှဈ‎နောကျကနြပေါပွီ။ သငျ့အနနေဲ့ iPhone တှကေို နှဈတိုငျးအသဈထှကျတိုငျး ကိုငျကို ကိုငျရမဲ့ သူတဈယောကျလို့ ခံယူထားရငျ ၊ Budget လဲ ပေါတယျဆိုရငျတော့ အောကျမှာ ဖျောပွမဲ့ အခကျြတှကေို ဆကျမဖတျပဲ 11 Pro series ကို လဲလိုကျပါ။ ဒါပမေဲ့ နောကျဆုံးပျေါအသဈဆိုတဲ့ခံစားခကျြရယျ ၊ iPhone X ထကျ features တှပေိုစုံတယျဆိုတဲ့ ခံစားခကျြရယျဟာ သာမနျဖုနျးအသဈလဲမဲ့ users တှအေတှကျ ပေးဆပျသငျ့ရဲ့လားဆိုတာ အောကျမှာ ဖျောပွမဲ့ အခကျြလေးတှေ နဲ့ ယှဉျထိုးကွညျ့လိုကျရအောငျ …
iPhone X ရဲ့ ရှမေ့ကျြနှာပွငျဘကျခွမျးဟာ iPhone 11 pro နဲ့ အတူတူပါပဲ ဖုနျးကို ပကျလကျလှနျပွီးခထြားရငျ ခှဲရတောငျ ခကျပါလိမျ့မယျ။ နောကျဘကျမှာတော့ camera အထားအသိုပွောငျးသှားတာရယျ ၊ အရောငျအသဈတှတေိုးလာတာရယျ ၊ နောကျက Glass ကို Matte finish (ကိုငျရတာ ခြောမနအေောငျ) လုပျပေးထားတာရယျကလှဲရငျ သုံးထားတဲ့ Materials တှကေလဲ အတူတူပဲ ဖွဈပွီး Design ပိုငျးကလဲ apple ရဲ့ ထုံးစံအတိုငျး သိပျပွီး မထူးခွားသှားပါဘူး။ တကယျလို့ လူကွားထဲမှာ ဖုနျးလာတဲ့အခါ ဖုနျးထုတျပွောရငျ ဖုနျးရဲ့နောကျဘကျခွမျးက ကငျမရာ setup ကွီးက iPhone 11 Pro ပါလားဟ ဆိုတဲ့ ခံစားခကျြမြိုးလိုခငျြရငျတော့ အသဈလဲသငျ့ပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ကတော့ iPhone X နဲ့ 11 Pro ကို Design ကွောငျ့ဆိုရငျ အခုခြိနျမှာ မလဲသေးပါဘူး။ (ဒါကြှနျတေျာ့ တဈဦးတညျး အမွငျဖွဈပါတယျ။) ပွီးတော့ နောကျတဈခကျြအနနေဲ့ 2020 မှာ iPhone တှရေဲ့ Design ပိုငျး ပွောငျးလဲလာနိုငျခလြေဲ ရှိပါသေးတယျ။ Design ပိုငျးကွောငျ့လဲခငျြတာဆိုရငျ iPhone 6/7/8 ပိုငျရှငျတှအေနနေဲ့ဆိုရငျတော့ လဲသငျ့တယျလို့ မွငျမိပါတယျ။
iPhone 11 pro ကို ဝယျဖို့စဉျးစားတာဟာ အခုလကျရှိသုံးနတေဲ့ iPhone X က အသုံးပွုရတာ မသှကျလကျပဲ လေးလံနလေို့လား? ဒါဆိုရငျတော့ မလဲသငျ့သေးပါဘူး iPhone 11 Pro ရဲ့ A13 chip ကွီးက Smartphones တှအေားလုံးထဲမှာ အကောငျးဆုံး ၊ အမွနျဆနျဆုံးဆိုတာ အမှနျတကယျဟုတျပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ အခုခြိနျမှာ သငျ့ရဲ့ iPhone X လေးပျေါမှာလဲ App store မှာ ရှိတဲ့ ဘယျလို Apps and Games မြိုးကို မဆို ကောငျးကောငျးအသုံးပွုနိုငျသလို Daily Usage မှာလဲ iPhone X ရဲ့ Performance ဟာစိတျမပကျြရသေးပါဘူး။
Camera ဆိုတဲ့ နရောမှာတော့ စဉျးစားရတာ နညျးနညျးခကျပါတယျ။ iPhone 11 Pro မှာ Night Mode ရမယျ ၊ Ultra Wide တှရေိုကျလို့ရမယျ ၊ ရှဘေ့ကျ Selfie Camera ကနေ Slofie (slow-mo Selfie video) တှေ ရိုကျလို့ရမယျ ၊ 4K recording ကို 60fps အထိရိုကျလို့ရမယျ။ ဒီအရာတှကေို iPhone X ပျေါမှာ ရိုကျလို့မရပါဘူး ဒါပမေဲ့ … ဓာတျပုံကောငျးတဈပုံဟာ camera ပျေါမှာ မူတညျတာမဟုတျပဲ Camera နောကျက လူပျေါမှာ အဓိက မှီတညျတယျဆိုတာကိုလဲ ပွနျလညျသတိခပျြစခေငျြပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ အမွငျအရတော့ iPhone X ရဲ့ camera ဟာလဲ ပုံမှနျနစေ့ဉျသုံးအတှကျ ပွညျ့စုံပွီး တျောရုံဖုနျးကငျမရာတှတေနျးတူ ကောငျးတုနျးပါပဲ။ Nightmode ဘာညာအတှကျ App သုံးမယျ ၊ Wide shot တှအေတှကျ Lens အပိုလေးတှနေဲ့ရိုကျမယျ စသညျဖွငျ့ ဖွသေိမျ့လို့ရပါတယျ။ အပျေါမှာပွောပွခဲ့တဲ့ iPhone 11 Pro ရဲ့ Camera လုပျဆောငျနိုငျစှမျးတှဟော သငျ့အတှကျ သိပျမထူးဘူးလို့ ခံစားရရငျ iPhone 11 Pro တှကေို မလဲသငျ့သေးပါဘူး။
iPhone 11 Pro တှရေဲ့ Super Retina XDR Display ကွီးဟာ Contrast တှေ ပိုကောငျးလာတယျ ၊ brightness တှမှော Nits(အလငျးအား) တှပေိုကောငျးလာတယျ ၊ iPhone X ထကျ ပိုပွီးကောငျးလာတယျဆိုတာတော့အမှနျပါ။ ဒါပမေဲ့… သငျ့ရဲ့ iPhone X မှာလဲ Smartphone တဈလုံးရဲ့ Display မှာရှိသငျ့တဲ့ အရညျအခငျြးတှေ အကုနျပွညျ့စုံနတေုနျးပါပဲ။ Pixels Per Inch(ppi) ခငျြး ယှဉျမယျဆိုရငျလဲ iPhone X မှာလဲ 458 ppi, iPhone 11 Pro မှာလဲ 458ppi အတူတူပဲဖွဈပါတယျ။ iPhone X ရဲ့ HDR, True Tone, Wide Color Gamut တှဟောလဲ iOS Apps အားလုံးနဲ့ ကောငျးကောငျးအလုပျလုပျနတေုနျးပါပဲ ဒီ App ကတော့ iPhone 11 Pro ရဲ့ Display ပျေါမှာမှ အလုပျလုပျမယျဆိုတာမြိုးမရှိသေးပါဘူး။ ပွီးတော့ iPhone X ထှကျခဲ့တုနျးကလဲ သူ့ခတျေမှာ အကောငျးဆုံး Display ဖွဈခဲ့တယျဆိုတာ မပေ့ဈလို့တော့ မရပါဘူး။
Display ကွောငျ့ဆိုရငျတော့ iPhone 11 Pro နဲ့ မလဲသငျ့သေးဘူးလို့ မွငျမိပါတယျ။
ဒီအခကျြကတော့ iPhone X က အနိုငျရတဲ့အခကျြပါ iPhone X ဟာ iPhone 11 Pro နဲ့ Pro Max ထကျပိုပေါ့ပွီး နညျးနညျးလေးပိုပါးပါတယျ။ ကိုငျရတာ လကျထဲမှာ ကဈြကဈြလဈလဈနဲ့ compact ပိုဖွဈပါတယျ။ iPhone X (174gram), 11Pro (188gram), 11 Pro Max(226gram) စီအသီးသီး ရှိပွီးတော့ iPhone X ကတော့ အပေါ့ပါးဆုံးဖွဈပါတယျ။ သငျက compact phone တှကေို ပိုသဘောကတြယျ ၊ လေးတာကိုလဲ မကွိုကျဘူးဆိုရငျ အထူးသဖွငျ့ 226 gram တောငျလေးတဲ့ 11 Pro Max ကို ဝယျဖို့သခြော စဉျးစားသငျ့ပါတယျ။ (ကြှနျတေျာ့အနနေဲ့ စဥျးစားရမယျဆိုရငျတော့ compact phone တှေ ၊ ပေါ့ပါးကဈြလဈတဲ့ ဖုနျးတှကေို သဘောကတြာကွောငျ့ 11 Pro Max ကို လုံးဝဝယျဖွဈမှာ မဟုတျပါဘူး ၊ ဖုနျးတဈလုံးဟာ အတျောလေးနပွေီး အိတျတှထေဲ ထညျ့လို့ အဆငျမပွတောမြိုးကို ကြှနျ‎တျောကတော့ သဘောမကပြါဘူး တကယျဆိုရငျ 138 gram ပဲရှိတဲ့ iPhone7ရဲ့ size နဲ့ အလေးခြိနျကို သဘောအကဆြုံးပါပဲ။ ဤကား စကားခပျြ)
iPhone Battery Chart
Battery Life မှာတော့ iPhone 11 Pro Series တှရေဲ့ အသုံးခံမှူဟာ အထငျကွီးစရာကောငျးပါတယျ။ iPhone 11 Pro (3046 mAh) ဟာ iPhone Xs ထကျ ၄ နာရီလောကျပိုအသုံးခံပွီး 11 Pro Max (3969 mAh) က Xs Max ထကျ ၅နာရီပိုပွီးအသုံးခံလာပါတယျ။ iPhone X မှာတော့ 2716 mAh ပဲ ပါဝငျပါတယျ။ ဆိုတော့ အပျေါကပွောခဲ့တဲ့ အခကျြတှအေားလုံးထဲမှာ အခုပွောတဲ့ Battery ပိုခံတာကို လိုခငျြတာကွောငျ့ဆိုရငျတော့ iPhone 11 Pro Series တှကေို လဲသငျ့ပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ဟာကို သခြောပွနျစဉျးစားကွညျ့ပါ Battery Life ကို ကိုယျက တကယျလိုအပျရဲ့လား ၊ အဲ့ Battery Life အတှကျနဲ့ iPhone 11 Series တှကေို လဲလိုကျမှာလား ဒါမှမဟုတျ 2020 iPhone အသဈတှကေို စောငျ့မလားဆိုတာကိုပေါ့။ ပွီးတော့ အခုကိုယျအသုံးပွုနတေဲ့ iPhone X ရဲ့ Battery Life က 80% အောကျရောကျနတေယျဆိုရငျ Authorized Reseller/Service တှမှော Battery Replacement Program တှရှေိပါတယျ။ (ကြှနျတျောဆိုရငျတော့ $70 လောကျသုံး Battery အသဈလဲပွီး iPhone X လေးကိုပဲ ဆကျကိုငျဖွဈနဦေးမှာပါ 😁)။
ဟုတျပါတယျ အဓိက အရေးကွီးဆုံးကတော့ iOS & User Experience ပါပဲ။ iPhone X ပျေါမှာလဲ iOS 13 ကိုကောငျးကောငျးအသုံးပွုနိုငျတယျ ၊ DarkMode လဲရတာပါပဲ ၊ iPhone 11 Pro လဲ iOS 13 သုံးတာပါပဲ သုံးရတဲ့ User Experience ခငျြးလဲ ထူးထူးခွားခွား ကှာသှားမှာ မဟုတျပါဘူး။ ပွီးတော့ အပိုဆုအနနေဲ့ iPhone X မှာ iPhone 11 Pro series တှမှော ဖယျရှားခွငျးခံလိုကျရတဲ့ 3D Touch လေးပါ အဆဈသုံးလို့ရပါသေးတယျ။
စာတှဖေတျလိုကျရတာ အရမျးရှညျသှားတယျမို့လား ၊ iPhone အသဈဝယျမဲ့ ပိုကျဆံလေးကို ပွနျသိမျးလိုကျပွီး လကျထဲက iPhone X လေးကိုပဲ ဆကျသုံးနလေိုကျပါလို့ အကွံပေးခငျြပါတယျ။ 😜
(အခု ဖျောပွခဲ့တဲ့ အရာတှကေ ပိုကျဆံပေါတဲ့သူတှေ ၊ Rick Kids တှေ ၊ iPhone Series အသဈတိုငျးကို အမွဲဝယျကိုငျနတေဲ့ သူတှအေတှကျ မဟုတျပဲ ကြှနျတေျာ့လို ဖုနျးတဈလုံးဝယျဖို့ စဉျးစားနတေဲ့သူတှေ ၊ 2020 iPhone တှကေို စောငျ့နတေဲ့သူတှအေတှကျ ဆိုတာ သတိခပျြပေးပါ) xD
Post Views: 4,315 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 2019 ခုနှဈမှာတော့ Mid-Range SmartPhones တှဟော အရငျကလို Processor အတျောအသငျ့၊ battery ကွီးကွီး၊ Dual
Post Views: 1,929 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 အားလုံးပဲ မင်ျဂလာပါ ဒီနမှေ့ာတော့ ကြှနျတျောတို့ SmartPhone Operating System တှထေဲမှာ Popular အဖွဈဆုံးနဲ့ လူသုံးအမြားဆုံး
Post Views: 1,225 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 3D Face Unlock VS in-display fingerprint readers Unicode Biometric ပိုငျးဆိုငျရာနညျးပညာတှကေို နစေ့ဉျ
Post Views: 6,692 Facebook0Tweet0Email0Share0Shares0 Apple ရဲ့ AirPods Pro နဲ့ AirPods2တို့ရဲ့ အဓိက ကှာခွားခကျြတှကေ ဘာတှလေဲ?AirPods
One thought on “iPhone X vs iPhone 11 Pro Should You Upgrade”
Pingback: 2020 iPhones to come with 120Hz ProMotion OLED Screen • TECH CORNER
Why do we buy expensive iPhone? (33,918)